Noopept (GVS-111) budada (157115-85-0) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Nootropics budada / Noopept (GVS-111) budada
Rating: SKU: 157115-85-0. Category: Nootropics budada
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud oo Noopept (GVS-111) budada (157115-85-0), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Noopept (GVS-111) budada waa mid ka mid ah nootropics-ka ugu xoogan ee maanta suuqa laga heli karo. Waxay kor u qaadaysaa garashada guud waxayna leedahay saameyn yar oo maskaxeed. Ka soo horjeedka nootropics badankood, saameynta Noopept waxay ku bilaabataa daqiiqado yar gudahood qaadashada taas oo ka dhigaysa xulasho aad u fiican mid sax ah ka hor intaan maskaxda laga saarin hawlaha.
Noopept (GVS-111) video budada
Noopept (GVS-111) Calaamadaha aasaasiga ah ee budada
Name: Noopept (GVS-111) budada
Miisaanka kelli: 318.37
Dhibcaha Biyaha: 97-98 ° C
Noopept (GVS-111) budada ku jira wareegga daroogada daroogada ee SMART
Budada Noopept waa magaca calaamadda N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, maaddada syntheticnootropic.
Noopept (GVS-111) isticmaalka budada
Iyada oo ay sabab u tahay awoodda aan la taaban karin, qiyaasta lagu taliyey ee budada Noopept waa mid aad u yar, badanaa 10 ilaa xajmiga 20 ayaa la qaataa inta badan seddex jeer maalintii. Qiyaasta waa inaysan ka badneyn 40 mg xaddiga 24.
Tan iyo markii jidhku si dhaqso ah u dhaqdhaqaaqo budada Noopept arwada, oo uu leeyahay nolol aad u gaaban oo jidhka bini'aadamka ah, waxaa habboon in la qaato qadar yar oo ka soo horjeeda hal dose oo waaweyn si loo kordhiyo saameynta ba'an ee budada Noopept.
Markaad ku bilowdo budada Noopept, waxaan kugula talineynaa bilawga qiyaasta ugu yar ee wax ku oolka ah, oo leh taxadar taxaddar leh, kahor inta kordhinta qiyaasta. Qof kastaa waa inuu go'aamiyaa qiyaasta ugu fiican ee u gaar ah.
Foomka budada ah, budada Noopept waxaa badanaa lagu dhejiyaa carrabka ama isku qasan biyo iyo sakhraan. Saameynaha ayaa dhakhso loo dareemey ka dib markii maamulka, sida ugu dhakhsaha badan daqiiqadaha 15.
Marka la eego calaamadda qiyaasta ee ku jirta baakadka baakidhka ee Russia, waxaa lagu talinayaa in la qaato budooyinka Noopept-ka ee usbuuca 1.5-3 ka dibna, haddii loo baahdo, si ay u bilaabaan wareeg kale ka dib fasax 1 ah. Haddii kale, dadka isticmaala bukaansocodka badani waxay raacaan wareegyo ah 56 maalmood iyo maalmaha 4.
Laguma talin in la qaato budada Noopept goor galabnimadii fiidkii iyada oo saameynteeda tamartu ay saameyn karto hurdada.
Maxay Noocyada Natiijooyinka Waa inaan Ka Bixiyaa budada GVS-111 (CAS 157115-85-0)
Xusuusin iyo Barashada
Faa'iidada ugu badan ee budada budada ah ee budada Noopept waa sida ay u xoojin karto xusuusta iyo hagaajinta habka waxbarashada. Budada Noopept, sida Piracetam, waxay gacan ka geysataa samaynta xasuusta, laakiin leh faa'idooyin dheeraad ah oo aan ku jirin kuwa dambe, taas oo ah xasuusta xasuusta iyo soo-qabashada xasuusta. Budada Noopept wuxuu fududeeyaa maaraynta saxda ah ee nooc kasta oo xayawaan ah sida ay maskaxda ka baaraandegaan, taas oo u ogolaaneysa in dib loo soo celiyo xasuusto ka fiican. Si kale haddii loo dhigo, calaamadaha lagu farsameeyo dareenadeena ayaa ah kuwo aad u sarreeya marka la geynayo maskaxdeenna qaabka xasuusta.
Iyada oo loo marayo isticmaalka joogtada ah ee budada Noopept, waxaad u badan tahay inaad ogaan karto inaad ku dhejin karto macluumaad dheeraad ah oo aad u sii wanaajin karto si aad u isticmaasho hawlahaaga maalmeed. Waxaad xitaa xusuusin kartaa magacyada, meelaha, laga yaabo in ereyga lagu hadlo fursad la kulmo, magac heeso ah oo aad u maleysey inaad illowday, iyo wixii la mid ah.
Qalabka neuroprotective Properties
Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in budada Noopept ay leedahay siyaabo badan oo neuroprotective. Kicinta qanjidhada ay sababtay siyaado caafimaadku waxay ka hortagtaa dhaawac xagga maskaxda ah iyo apoptosis ee maskaxda aadanaha. Bukaanno badan oo ka shaqeeya cilladda garashada ayaa si joogto ah uga faa'iideysan kara qiyaasta caadiga ah ee Noopept buddo cayriin ah si looga hortago hawlaha garashada maqnaashaha.
Heerarka sare ee NGF
NGF (Factory Growth factor) waa unug gaar ah oo jirka ku jira oo ku lug leh koritaanka, dayactirka, iyo noolaanshaha unugyada dareemayaasha, oo ay ku jiraan unugyada maskaxda. NGF sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay ciyaaryahan muhiim ah oo ku jira neurogenesis, awoodda jirka ee aad ku abuuri karto unugyo cusub.
Iyada oo la kordhinayo heerarka NGF ee maskaxda, waxaan taageernaa hababka ku lug leh nurogenesis kaas oo hagaajiya waxtarka nucarrada shabakada maskaxda ee maskaxda ku jirta, taas oo u oggolaanaysa isku-xireyaasha nudaha cusub. Natiijadu waxay ka dhigan tahay awoodda maskax ahaaneed ee laga yaabo inay korodho awoodda maskaxeed ee dhammaan dhinacyada garashada.
Heerarka sare ee BDNF
Cudurka neerotrophic BDNF waa borotiinka kale ee jirka ee leh doorka la midka ah NGF ee kor ku xusan. BDNF waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah mecoriyeyaasha ugu muhiimsan ee ku lug leh xusuusta, ka ciyaarista kaalin muhiim ah oo ku saabsan sameynta xasuusta gaaban iyo muddada dheer.
Waxay hagaajinaysaa Ururada u dhexeeya Maskaxda Maskaxda
Labada midba midka midig iyo bidix ee maskaxdu waxay leeyihiin shaqooyinkooda. Iyada oo la adeegsanayo budada Noopept, mid kasta oo ka mid ah hawlahaas ayaa loo sii hagaajin karaa iyada oo loo marayo qoraalka xasuusta kala duwan, fikradaha, iyo dhiirigelinta. Waxaa jira waxyaalo ka mid ah shaqooyinka kuwaas oo kor u qaada sida aan u fekereyno. Taasina waa sababta dad badani ay sheegteen in tayada noloshooda ay ku fiicnayd inay ka soo kabato budada Noopept si joogto ah.
Budada Noopept (CAS 157115-85-0) wuxuu shaqeeyaa
Isticmaalayaasha natiijooyinka warbixinta budada Noopept ee daahfurnaanta hagaagsan, xusuusin fiican, iyo diiradda. Daraasado badan ayaa looga baahan yahay si loo go'aamiyo sida budada Noopept ay ufududeyso faa'iidooyinkeeda maskaxda aadanaha. Daraasado ku saabsan xayawaanka ayaa muujiyay in budada Noopept ay kordhiyeen waxqabadka alpha / beta1 ee dhammaan maskaxda.
Bini'aadamka, oo ku salaysan daraasad aan la xakameynin, budada Noopept waxay muujisay faa'iidooyinka dhaqancelinta bukaannada qaba xanuunka fudud ee fudud. Waqtigaan, kiniinnada budada ah ee Noopept ayaa la socda qiimeynta bukaan-socodka iyada oo loo marayo habka lagu daaweynayo maqnaanshaha garashada ee asalka jinsiga iyo sababaha maskaxda. Faa'iidooyinka maskaxda waxaa laga soocaa ficilka antioxidant, sifooyinka anti-bararka, iyo xakamaynta sunta oo leh ciribtirka glutamate iyo calcium xad dhaaf ah. Waxaa sidoo kale lagu arkay in qaabeynta dhiigga iyo socodka la hagaajiyay.
Afka laga qaato, budada Noopept waxaa nuugaya nidaamka dheef-shiid kiimikaadka kadibna si sahlan u gudubta caqabadda dhiig-maskaxda. Marka lagu maamulo qiyaasta saxda ah, waxay ku dhowaadba gebi ahaanba isticmaashaa maskaxda, wax yarna way baaba'aan. Budada Noopept waxay bartilmaameedsanayaan goobaha lagu daaweynayo glutamate halkaas oo la aaminsan yahay in ay ku xiran tahay glutamate iyo burburinta. Glutamate, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan neurotransmitters, waxay taageertaa oo ballaarisaa hawlaha garashada.
Budada Noopept waxay dhaqso u dhaqdaa marka ay ku jirto dhiigga, siinta xoojinta ka dib 15 ilaa daqiiqo 20. U-doodayaasha dheeraadka ah waxay soo tebiyaan daadinta caddaynta ay keeneen faa'iidada degdegga ah ee oksijiinta dheeraadka ah ee maskaxda iyo isticmaalka sonkorta dhiigga. Dad badani waxay soo sheegaan aragti fiican iyo midabyo badan, midabyo badan oo firfircoon. Qaar kale ayaa xitaa soo sheegey maqal kordhay kadib markii la isticmaalay mudo gaaban.
Budada Noopept waa supplement nootropic taas oo ay heleen badan oo taxadar ah dhowaan. Waxay xiriir la leedahay qoyska jimicsiga caanka ah ee nootropics kuwaas oo loo yaqaan faa'iidooyinka ay ku leeyihiin kartida garashada iyo sidoo kale guryaha neuroprotective. Maxaa ka dhigaya budada cayriin ee Noopept gaar ahaan aotropic gaar ah ee qalabka aad leedahay waa in ay saameyn ku dareemay isla markiiba ka dib markii laqo.
Nootropics badani waxay qaadan kartaa maalmo, toddobaadyo, ama xitaa bilo, si ay saameyn buuxda u leeyihiin in ay laadiyaan, laakiin budada cayriin Noopept waa sheeko kale. Nootropic kale oo isbarbardhigaya saameyn degdeg ah budada Noopept waa phenylpiracetam.
Waqtigaan, budada cayriin ee Noopept ayaa la qorey waxaana loo qaybiyey Ruushka iyo waddammada ku hareereysan guryaha hoygooda. Caannimadu si weyn ayay u kordhay waxaana hadda loo qaybiyey adduunka.
Budada Noopept sida Nootropic ayaa inta badan la barbar dhigaa burcad-badeedda iyo aniracetam. Waxay ka shaqeyneysaa nidaam la mid ah sida piracetam laakiin waxaa lagu qiyaasaa 1,000 ilaa 5,000 xoogaa awood badan. Waxtarkeeda cajiibka ah micnaheedu maaha in ay saameyntu aad u qoto dheer tahay; Waxay si fudud u isku dayaysaa inay soo celiso maskaxda qabta, sidaas darteed, budada cayriin Noopept waxaa lagu qaadi karaa qiyaaso yar yar si loo soo saaro saameyn isku mid ah sida kuwa Piracetam.
Budada Noopept sidoo kale waa mid aad u jaban marka la barbar dhigo nootropics kale sababta oo ah sida xooggan u yahay milligram. Waxtarkeeda iyo qiimaha la awoodi karo ee qiyaasta qaadashada ayaa ka dhigay midka ugu wanaagsan ee bulshada nootropic ah.
GVS-111 qashin budada ah
Noopept (GVS-111) Suuq-geynta Sheyga
Miyuu budada Noopeptu leeyahay Saameyn Waxyeello ah
Dhammaan saameynta wanaagsan ee naaska budada Noopept ay ku yeelan karto caafimaadka garashadaada, waxay leedahay marar dhif ah oo lagu soo waramey saameyno yar yar oo ay tahay in la xuso sida madax xanuun, nasasho la'aan, dawakhaad, iyo caro. Kuwani waa kuwa ugu caansan marka budada cayriin ee Noopept lagu qaato qiyaaso sarreeya.
Caddeyn dheeraad ah waxay sidoo kale soo jeedinaysaa in budada Noopept ay kor u qaadi karto saameynta kiciyeyaasha sida amphetamines, sidaa daraadeed taxadar ayaa lagula talinayaa.
Sida loo iibsado budada GVS-111: ka iibso budada Noopept laga bilaabo AASraw